ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုသတိပေးချက်သည်သင်အသုံးပြုသောအခါကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းများ (“ အက်ပ် (များ)”) သို့မဟုတ်ဤသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက် (စုပေါင်း၍“ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ”) ကိုချိတ်ဆက်ထားသောဝန်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဤသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်သည် Hissho International, LLC, 11949 Steele Creek Road Charlotte, NC 28273 (“ Hissho”“ Company”,“ we” သို့မဟုတ်“ us”) သည်သင်နှင့်ပတ်သက်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုမည်သို့စုဆောင်းအသုံးပြုသည်၊ မျှဝေသည်ကိုဖော်ပြသည်။ အတိအလင်းဖော်ပြထားသည် မှလွဲ၍ ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုသတိပေးချက်သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များပြင်ပတွင်ရရှိသောသင်စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သဘောတူသည် စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ ဤသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့်ထုတ်ဖော်ခြင်းအလေ့အကျင့်များနှင့်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများကိုသဘောတူသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥရောပစီးပွားရေးAreaရိယာ (EEA) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတို့မှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ အမေရိကန်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနမှသတ်မှတ်ထားသည့် EU-US Privacy Shield Framework တွင်ပါ ၀ င်သည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယား - သတ်သတ်မှတ်မှတ်ထုတ်ဖော်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားဖောက်သည်များ၊ သင်၏ကယ်လီဖိုးနီးယားဖောက်သည်များအဘို့အပိုဆောင်းထုတ်ဖော်မှုများကိုကြည့်ပါ။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ရရှိထားသောအခွင့်အရေးများကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့စုဆောင်း၊ အသုံးပြုသည်၊
သင်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောသတင်းအချက်အလက်။ သင်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါ၊ အကောင့်ပရိုဖိုင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်များကိုစာရင်းသွင်းခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ခြင်း၊ အသိပေးချက်တွန်းအားပေးခြင်းသို့မဟုတ်လူမှုမီဒီယာအသိပေးခြင်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုရမ်များသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်များပေါ်တွင်တင်ခြင်း၊ ပြိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းသို့မဟုတ်မဲဆန္ဒခြင်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်ကို ၀ ယ်ပါ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဒီဂျစ်တယ်လက်ဆောင်ကဒ်များကိုမှာယူပါ၊ ဖောက်သည်များထံမှအကူအညီတောင်းပါ၊ အလုပ်လျှောက်ထားပါသို့မဟုတ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
သတင်းအချက်အလက်အမျိုးအစားများ။ ကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူနိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်အမျိုးအစားများတွင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ “ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်” ဆိုသည်မှာသင်၏ပထမနှင့်နောက်ဆုံးအမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ စာပို့သင်္ကေတ၊ စာပို့နံပါတ်၊ ငွေတောင်းခံလိပ်စာ၊ ပို့ဆောင်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ ငွေပေးချေကဒ်အချက်အလက်စသည့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် (တစ်ခုတည်းဖြစ်စေပေါင်းစပ်ထားသည်) ကိုဖော်ထုတ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည့်အချက်အလက်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်၊ ဓာတ်ပုံနှင့်သင်ရွေးချယ်ရန်အခြားရွေးချယ်နိုင်သောအခြားအချက်အလက်။ ၎င်းတွင်ကျန်းမာရေးနှင့်မိသားစုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကဲ့သို့အထိခိုက်မခံသောသတင်းအချက်အလက်များလည်းပါဝင်နိုင်သည်။ သက်ဆိုင်သောဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်း၊ ဤသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်သို့မဟုတ်စုဆောင်းခြင်း၏အချက်အလက်များတွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက (၁) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်မဟုတ်သော (“ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်မဟုတ်သော”) ကိုသင်နှင့်တာဝန်ဝတ္တရားမရှိပဲမျှဝေနိုင်သည်။ (၂) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း (သို့) အခြားမဟုတ်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းခံရနိုင်သည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်ဆက်နွယ်မှုမရှိပါကကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း၊ သင့်မိသားစု၊ သင်၏အကောင့်ပရိုဖိုင်ရှိသင်၏စိတ်ဝင်စားမှုများနှင့်အခြားအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးစေနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်များမှတစ်ဆင့်ကောက်ယူထားသောသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပေါင်းစပ်။ အတိုင်းအတာအထိ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်သတိပေးချက်အောက်ရှိစုစည်းထားသောအချက်အလက်များကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အဖြစ်ဆက်ဆံပါမည်။ သင်၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်အကောင့်ပရိုဖိုင်းကိုမည်သို့ပြောင်းလဲမွမ်းမံရမည်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါ“ သင်၏ရွေးချယ်မှုများ - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် Apps များ” အပိုင်းတွင်ကြည့်ပါ။
ကျနော်တို့အလိုအလျောက်စုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်ဝင်ရောက်သောအခါသို့မဟုတ်အသုံးပြုသောအခါကျွန်ုပ်တို့၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်သင့်အကြောင်းအချို့သောအချက်အလက်များကိုအလိုအလျောက်စုဆောင်းနိုင်သည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သောဤအချက်အလက်တွင်လူ ဦး ရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များပါ ၀ င်နိုင်သည်။ အိုင်ပီလိပ်စာ; browser / device / hardware အမျိုးအစား၊ operating system ကိုဝိသေသလက္ခဏာများ; ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်၊ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ထားသောဟာ့ဒ်ဝဲ (ဥပမာကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်း) နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်၊ ဥပမာထူးခြားသောစက်ပစ္စည်းအမှတ်အသား၊ အမျိုးအစား၊ ပုံစံ၊ ဗားရှင်း၊ MAC လိပ်စာ၊ စက်သို့မဟုတ် session ID၊ အမှားနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များ၊ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ အတည်ပြုခြင်း၊ ဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစား။ ထိုသတင်းအချက်အလက်တွင် clickstream အချက်အလက်လည်းပါဝင်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ဖြတ်၍ သင်ကြည့်ရှုနေသည့်စာမျက်နှာတစ်ခုချင်းအလိုက်လမ်းကြောင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်ဖြစ်သည်။
သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်း၏နည်းလမ်းများ။ ကျွန်ုပ်တို့၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် ဆက်စပ်၍ ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုအလိုအလျောက်စုဆောင်းရန်အသုံးပြုသောနည်းလမ်းများတွင် -
သတင်းအချက်အလက် Log ။ သင်အသုံးပြုသောဘရောင်ဇာအမျိုးအစား၊ ဝင်ရောက်ချိန်များ၊ ကြည့်ရှုသည့်စာမျက်နှာများ၊ သင်၏ IP လိပ်စာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့်ရည်ညွှန်း link စသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်။
ကွတ်ကီးများနှင့်အခြားခြေရာခံသည့်နည်းပညာများကစုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တွဲဖက်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်တတိယပါတီများကသင်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောအခါသင်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန် cookies များ၊ ဝဘ်ဘေကွန်များ (“ tracking pixels” ဟုလည်းခေါ်သည်) နှင့်ယခုလက်ရှိလက်ရှိသို့မဟုတ်နောင်တွင်တီထွင်ထားသောခြေရာခံသည့်နည်းပညာများ (“ Tracking Technologies”) ကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ၊ အီးမေးလ်များသို့မဟုတ်တတိယပါတီ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ သင်၏ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဝယ်ယူခြင်းအပြုအမူများအပါအဝင်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုပေါင်းစပ်။ အမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သုံးနိုင်သည်။ ဥပမာကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်သင်၏အွန်လိုင်းအတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်၊ သင့်လျော်သောအကြောင်းအရာများ၊ ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်ကြော်ငြာများ၊ ထုတ်ကုန်များမှသင့်ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အင်္ဂါရပ်များသည်လူကြိုက်များသည်၊ လာရောက်လည်ပတ်သူရေတွက်ခြင်း၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်း၏ထိရောက်မှုကိုနားလည်ခြင်း၊ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်မှုများကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေခြင်း၊ အီးမေးလ်တစ်ခုအတွင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အီးမေးလ်အတွင်းရှိလင့်ခ်များကိုနှိပ်ခြင်း၊ လိမ်လည်မှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်အခြားစီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖြစ်သည်။ ခြေရာခံသည့်နည်းပညာများသင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် ဆက်စပ်၍ တွေ့နိုင်သည်။
ကွတ်ကီး ကွတ်ကီးများဆိုသည်မှာအချက်အလက်ဖိုင်များဖြစ်ပြီးကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ခုသို့လည်ပတ်သောအခါအသုံးပြုသောကွန်ပျူတာတွင်နေရာချခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကွတ်ကီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအသုံးပြုနေစဉ်အသုံးပြုသူအကြိုက်များသို့မဟုတ် ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာများကိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲခြေရာခံခြင်းအပါအဝင်ရည်ရွယ်ချက်များစွာအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဝဘ်ဘရောက်ဆာအများစုသည်ပုံမှန်အားဖြင့် cookies များကိုလက်ခံရန်သတ်မှတ်ထားသည်။ သင်နှစ်သက်လျှင် cookies များကိုဖယ်ရှားရန်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ရန်သင်၏ browser ကိုများသောအားဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ သို့သော်ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဆက်စပ်သောအသုံးပြုသောတတိယပါတီ flash cookies အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်းသတိပြုပါ။ အကယ်၍ သင်သည် cookies များကိုဖယ်ရှားရန်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ရန်ရွေးချယ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ၏ရရှိနိုင်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကွတ်ကီးများကသင်၏လှည်းတွင်ပစ္စည်းများကိုလည်ပတ်မှုများအကြားတွင်သိုလှောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် cookies များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်ရန်ရွေးချယ်ပါက cookies များကိုမှီခိုနေသည့်အချို့သောကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဦး စားပေးမှုများကိုလေးစားရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။
Web Beacons ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက်စာမျက်နှာများနှင့်အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများတွင်“ Internet tags” သို့မဟုတ်“ clear gifs” ဟုလည်းလူသိများသည့် web beacons ဟုခေါ်သောဂရပ်ဖစ်ရုပ်ပုံများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ visitors ည့်သည်အရေအတွက်ကိုရေတွက်ရန်၊ အသုံးပြုသူများဝက်ဘ်ဆိုက်များ ၀ င်ရောက်ပုံကိုစောင့်ကြည့်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ဖွင့်လှစ်ထားသောအီးမေးလ်အရေအတွက်ကိုရေတွက်ခြင်းအပါအဝင်ကန့်သတ်ချက်များမရှိသော web beacons သို့မဟုတ်အလားတူနည်းပညာများကိုရည်ရွယ်ချက်များစွာအတွက်သုံးနိုင်သည်။ ဘယ်ဆောင်းပါးသို့မဟုတ်လင့်များကိုအမှန်တကယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြသည်။
Embedded Scripts ။ Embedded script ဆိုသည်မှာ website code များနှင့်သင်၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော programming code ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသင်၏ဝက်ဘ်ဆာဗာမှသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သည့်တတိယပါတီမှသင့်ကွန်ပျူတာသို့ခေတ္တဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပြီးသင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားမှသာတက်ကြွစွာပြုလုပ်ပြီး၎င်းကိုပယ်ဖျက်သို့မဟုတ်ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။
တည်နေရာ - ဖော်ထုတ်နည်းပညာများ။ GPS (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတည်နေရာပြစနစ်များ) ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ပထဝီစစ်ထုတ်ခြင်းနှင့်အခြားတည်နေရာ - သတိထားသည့်နည်းပညာများသည်သင်၏တည်နေရာကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်သင်၏တည်နေရာပေါ် မူတည်၍ အကြောင်းအရာများကိုပေးပို့ခြင်းသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ခြင်းစသည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင့်တည်နေရာနှင့်ပတ်သက်သောယူဆချက်များ (တစ်ခါတစ်ရံတိကျစွာတိကျစွာ) ကိုရှာဖွေသည်။ အကယ်၍ သင်သည် GPS ကိုဖွင့်ထားပါကသို့မဟုတ်အခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်တည်နေရာအခြေခံအင်္ဂါရပ်များကိုအသုံးပြုပါကသင်၏စက်ပစ္စည်းတည်နေရာကိုခြေရာခံနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စတိုးဆိုင်ရှာဖွေသူအင်္ဂါရပ်သည်သင့်လျော်သောစတိုးဆိုင်တည်နေရာများကိုအကြံပြုရန်သင်၏စက်ပစ္စည်းတည်နေရာ (ဥပမာ IP လိပ်စာပေါ်အခြေခံသည့်) သို့မဟုတ်သင်၏အကောင့်အချက်အလက်များကိုသတင်းအချက်အလက်ရယူနိုင်သည်။
In-App Tracking နည်းလမ်းများ။ လက်ကိုင်ဖုန်းအသုံးချပရိုဂရမ်များတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည့် Tracking Technologies အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် browser-based cookies များမဟုတ်သောကြောင့် browser setting မှထိန်းချုပ်မရနိုင်ပါ။ အချို့သည်အက်ပလီကေးရှင်းအသုံးပြုသူလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်ရန်နှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် / သို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအကြားအသုံးပြုသူလှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံရန်စက်ပစ္စည်းအမှတ်အသားသို့မဟုတ်“ ကြော်ငြာ IDs” ကဲ့သို့သောအခြားအမှတ်အသားကိုသုံးသည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအခြားသတင်းအချက်အလက်များနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်း။ သင့်အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အလိုအလျောက်စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များ၊ ဥပမာကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်သင်မည်သို့ဆက်ဆံသည်၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအလိုအလျောက်စုဆောင်းထားသောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတဆင့်သင်စုဆောင်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်ဆက်စပ်သည့်အတိုင်းအတာအထိ၊ ပေါင်းစည်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်သတိပေးချက်အောက်ရှိကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်ဆံပါလိမ့်မည်
ခြေရာခံနည်းပညာများ။ သင်၊ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အခြားတတိယအဖွဲ့အစည်းများသည်သင်၏အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီ ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုခြေရာခံခွင့်ပြုသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်ကြည့်ရှုသည့်အခါ Tracking Technologies နှင့်သင်၏စက်ပစ္စည်းနှင့်တွဲဖက်ခြင်း၊ သင်၏ဝယ်ယူမှုလမ်းကြောင်းများနှင့် / သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များမှတစ်ဆင့်ဖော်ထုတ်ထားသောအကျိုးစီးပွားများနှင့်ကိုက်ညီသောကုန်ပစ္စည်းအရောင်းမြှင့်တင်မှုများ။ ခြေရာခံနည်းပညာများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသင်၏ရွေးချယ်မှုများအတွက်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်“ Advertising & Analytics Websites နှင့် Online Tracking” နှင့်“ Analytics, Advertising, Online Tracking and Your Choices” အပိုင်းများကိုကြည့်ပါ။ Tracking Technologies နှင့်၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သောသင်၏ရွေးချယ်မှုများအကြောင်းကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့အသိပေးထားပါသည်။ သို့မှသာသူတို့နှင့်သင်တွေ့ရန်သင်၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုအဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝစွာအသိပေးလိမ့်မည်။
အခြားရင်းမြစ်များမှကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူသောသတင်းအချက်အလက်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကို (ဥပမာအီးမေးလ်၊ လိပ်စာ၊ လူ ဦး ရေဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့် Cross-device ဒေတာ) အခြားရင်းမြစ်များမှရယူပြီးသင်နှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တတိယပါတီရင်းမြစ်မှသင့်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအတိုင်းအတာအထိ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတတိယပါတီရင်းမြစ်များမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်များမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များကိုပေါင်းစပ်ပြီး၎င်းပေါင်းစပ်ထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဤသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်အောက်ရှိကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်ဆံမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တတိယပါတီများမှပေးသောသတင်းအချက်အလက်များ၏တိကျမှု၊ သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီများကထိုသတင်းအချက်အလက်များကိုမည်သို့စုဆောင်း၊ အသုံးပြု၊ မျှဝေပုံတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့တွင်တာ ၀ န်မရှိပါ။
ကြော်ငြာ & Analytics ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အွန်လိုင်းခြေရာခံခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားကိုယ်စားပြုကြော်ငြာများကိုအင်တာနက်မှတဆင့်၊ သင့်အကြောင်းအပိုဆောင်းအချက်အလက်များကိုပေးရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုပေးရန်တတိယပါတီများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်ဆံနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်တူညီသောကွန်ယက်များနှင့်လဲလှယ်မှုများတွင်ပါ ၀ င်သည့်တတိယပါတီ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်ထင်ဟပ်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ visitors ည့်သည်များအားသူတို့၏စိတ်ဝင်စားမှုအပေါ် အခြေခံ၍ သက်ဆိုင်ရာကြော်ငြာများကိုပြသသည့်အွန်လိုင်းကြော်ငြာကွန်ရက်များနှင့်ဖလှယ်မှုများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းများသည်သင်၏ IP လိပ်စာ၊ ဝဘ်ဘရောက်ဇာ၊ စာမျက်နှာများကြည့်ရှုခြင်း၊ စာမျက်နှာများပေါ်တွင်အချိန်ကုန်ခံခြင်း၊ နှိပ်ခြင်းနှင့်ကူးပြောင်းခြင်းများကဲ့သို့သောသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုအလိုအလျောက်စုဆောင်းရန် cookies များ၊ ဝက်ဘ် beacons များ၊ pixels များ၊ embedded scripts များနှင့်အခြား Tracking နည်းပညာများကိုသုံးနိုင်သည်။ သတင်းအချက်အလက်။ ဤအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်အခြားသူများကအခြားအရာများအနက်အချက်အလက်များအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်ခြေရာခံရန်၊ အချို့သောအကြောင်းအရာများ၏လူကြိုက်များမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်သင်၏အကျိုးစီးပွားနှင့်သက်ဆိုင်သောကြော်ငြာများနှင့်အကြောင်းအရာများကိုပေးပို့ရန်နှင့်သင်၏အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုနားလည်စေရန်ဤအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အချို့သောတတိယပါတီတည်နေရာများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အချို့သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ၊ အချို့သောတတိယပါတီတည်နေရာများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများမှသင့်အားအကြောင်းအရာများ၊ ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်ကြော်ငြာများကိုပို့ဆောင်ရန်ထိုကုမ္ပဏီများနှင့်မျှဝေနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ သင်ကြည့်ရှုခဲ့သောတတိယပါတီ၏တည်နေရာများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် Cross-device Data အပါအ ၀ င်သင့်အကြောင်းအခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုဤကုမ္ပဏီများမှအချို့ထံမှရရှိနိုင်သည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်လက်လီအရောင်းဆိုင်တစ်ခုမှသတင်းအချက်အလက်များကိုအခြားလက်လီအရောင်းဆိုင်များမှသက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်ကိုညွှန်ပြရန်ထိုအလေ့အကျင့်ကို“ အကျိုးစီးပွားအခြေပြုကြော်ငြာခြင်း” သို့မဟုတ်“ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း” ဟုတစ်ခါတစ်ရံတွင်ခေါ်လေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်သင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်သင့်အားကြော်ငြာများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်တတိယပါတီများနှင့်လည်းအလုပ်လုပ်နိုင်သည် ငါတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုသင့်အားပေးရန်ဤအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သုံးနိုင်သည်။
တတိယပါတီလှုပ်ရှားမှုများ။ ဤသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာအလေ့အကျင့်များဖော်ပြချက်သည်တတိယပါတီလှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်တတိယပါတီများမှသင့်ထံမှသင်ထံမှစုဆောင်းထားခဲ့သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်းမပါဝင်ပါ။ အချို့သောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များကမူသင်၏ Tracking Technologies နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားရွေးချယ်ခွင့်ပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တတိယပါတီရွေးချယ်မှုသတိပေးချက်များသို့မဟုတ်ယန္တရားများအတွက်တာဝန်မရှိပါ။
ဆက်တင်များကိုမခြေရာပါနှင့်။ သင်၏ browser setting များကသင်“ သင်မခြေရာခံရန်” အချက်ပြမှုကိုသင်ကြည့်ရှုသောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများသို့အလိုအလျောက်ထုတ်လွှင့်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ကိုသတိပြုပါ။ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်ပါ ၀ င်သူများအနေဖြင့်ဤအခြေအနေတွင်“ Do Not Track” ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုသဘောမတူပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာနှင့်အွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကဲ့သို့ပင် Hissho သည် Do ည့်သည်၏ browser မှ“ Do Not Track” အချက်ပြလာသောအခါ၎င်း၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုမပြောင်းလဲပါ။ “ Do Not Track” အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုလျှင်သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုလိုပေမည် http://www.allaboutdnt.com.
ဝယ်ယူမှုများ၊ အမိန့်များ၊ ငွေပေးချေမှုများ၊ ပြန်လာမှုများ၊ ဖလှယ်မှုများနှင့်ဖိုရမ်နှင့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များအပါအဝင်သင်၏အွန်လိုင်းအကောင့် (များ) ကိုစီမံပါ။
သင့်အားနည်းပညာဆိုင်ရာသတိပေးချက်များ၊ နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ လုံခြုံရေးသတိပေးချက်များနှင့်အထောက်အပံ့နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းများကိုပေးပို့ပါ။
ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကမ်းလှမ်းမှုများ၊ အရောင်းမြှင့်တင်မှုများ၊ ကူပွန်များ၊ သတင်းလွှာများ၊ ဆုများနှင့်အဖြစ်အပျက်များအကြောင်းသင်နှင့် ဆက်သွယ်၍ သင်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သောသတင်းများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြပေးပါ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော“ သင်၏ရွေးချယ်မှုများ” အပိုင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်စေရန်။
ပြိုင်ပွဲ၊ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်လှူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာ entries မ်ားနှင့်ဆုလာဘ်များကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ပေးပို့ခြင်း။
သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ရန်နှင့်သင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အခြားသူများထံမှကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါ်လစီများပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားဆက်သွယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောသတိပေးချက်များကိုသင့်အားပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အခြား Hissho ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အုပ်စုများနှင့်စစ်တမ်းများအပါအဝင်သုတေသနနှင့်ဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ပါ။
သက်ဆိုင်သောဥပဒေအရတားမြစ်ထားခြင်းမရှိခြင်းနှင့်ဤသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက် (သို့) သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအခြားနေရာများတွင်ထုတ်ဖော်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီသောအခြားရည်ရွယ်ချက်များကိုဆောင်ရွက်ရန်။ နှင့်
သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ ဦး တည်ချက်မှာ
ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိလျှင်သက်ဆိုင်သောဥပဒေများကခွင့်ပြုထားသောစုစည်းထားသောနှင့်အခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာမဟုတ်သောအချက်အလက်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည်။
သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရောင်းချသူများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ (“ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ”) သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားလုပ်ဆောင်ရန်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်သင့်အကြောင်းအခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထံမှရယူနိုင်သည်သို့မဟုတ်လက်ခံနိုင်သည်။ သို့သော်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအားသင်၏အထောက်အကူပြုရန်မဟုတ်သည့်အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့ခွင့်မပြုပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအောက်ပါအတိုင်းမျှဝေနိုင်သည် -
ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ တွဲဖက်များနှင့်အခြားတတိယအဖွဲ့အစည်းများနှင့်သင်ကိုယ်ပိုင်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုပို့ရန်ရည်ရွယ်သည်မှာသင်ကကယ်လီဖိုးနီးယားဖောက်သည်မဟုတ်ဘဲ“ ကယ်လီဖိုးနီးယားဖောက်သည်များအတွက်အပိုဆောင်းထုတ်ဖော်မှုများ” တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမျှဝေခြင်းအမျိုးအစားကိုသင်ရွေးချယ်ခြင်းမဟုတ်လျှင်အများဆုံးခွင့်ပြုထားသည်။ သက်ဆိုင်သောဥပဒေအရ (i) ဆင့်ခေါ်စာသို့မဟုတ်အခြားဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းမွန်သောယုံကြည်မှုအမြင်တွင်ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ဖော်မှုကိုဥပဒေအရခွင့်ပြုလျှင်၊ (၂) စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေသောအစိုးရအာဏာပိုင်များ၏တောင်းဆိုချက်အရ၊
ကျွန်ုပ်တို့ (သို့) တတိယပါတီ၏အခွင့်အရေးများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ အသက်၊ ကျန်းမာရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေးတို့ကိုကာကွယ်ရန်။
သက်ဆိုင်သောဥပဒေမှခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းအတာအထိကျွန်ုပ်တို့သည် IP လိပ်စာများ၊ မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းအမှတ်အသားများသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်များ၊ အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ ကြိုးမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများသို့မဟုတ်ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပြုလုပ်နိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မာသတိ၌တည်၏။ သက်ဆိုင်သောဥပဒေမှခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းဤထုတ်ဖော်မှုကိုသင့်အားအသိပေးခြင်းမရှိပဲဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ affiliates နှင့်အတူ;
ငှားရမ်းခြင်း၊ စုစည်းခြင်းသို့မဟုတ်အခြား Hissho ပိုင်ဆိုင်မှု၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသို့မဟုတ်မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆိုဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း (ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ သဘောပေါက်ခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်းအပါအ ၀ င်) အဆိုပြုထားသည့်သို့မဟုတ်အမှန်တကယ်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားစွန့်ပစ်ခြင်း၊ ပို့ခြင်းသို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းခြင်း၊
ထိုကဲ့သို့သောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့၎င်း၊
သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ ဦး တည်ချက်မှာ။
သင်လူသိရှင်ကြားထုတ်လွှင့်သည့်သတင်းအချက်အလက်များသို့မဟုတ်အခြားသူများသို့။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ (စုပေါင်း၊ “ အသုံးပြုသူပါဝင်သည့်အရာများ”) အပါအဝင်စိတ်ကူးများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ သုံးစွဲသူကိုယ်ရေးရာဇဝင်များ၊ အရေးအသားများ၊ တေးဂီတ၊ ဗွီဒီယို၊ အသံသွင်းချက်များ၊ ကွန်ပျူတာဂရပ်ဖစ်၊ ရုပ်ပုံများ၊ အချက်အလက်၊ မေးခွန်းများ၊ မှတ်ချက်များ၊ ဘလော့ဂ်များနှင့်ဖိုရမ်များကဲ့သို့၊ သင်၏အကောင့်နှင့်အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သို့မဟုတ်အခြားသူများသည်အသုံးပြုသူများကိုအွန်လိုင်း (သို့) အော့ဖ်လိုင်း (လက်ရှိရှိပြီးသားသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတွင်တီထွင်ထားသည့်) တွင်သိုလှောင်ခြင်း၊ ပြသခြင်း၊ ပုံတူကူးချခြင်း၊ အခြားသူများကဒီအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိနိုင်ပါသည်နှင့်တတိယပါတီများနှင့်အတူမျှဝေနိုင်စွမ်းရှိလိမ့်မည်။ သင်၏အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာနှင့် ဆက်စပ်၍ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအပါအဝင်သင်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမျှဝေခြင်းမပြုမီဂရုစိုက်ပါ။ လူသိရှင်ကြားထုတ်လွှင့်ရန်သင်ရွေးချယ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုမည်သူရရှိမည်ကို Hissho ကမထိန်းချုပ်ကြောင်းနှင့်လူသိရှင်ကြားသတင်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်သောပါတီများကသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကိုလေးစားရန်သို့မဟုတ်လုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းထားရန်မထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်လူသိရှင်ကြားဖြစ်စေသောအခြားသတင်းအချက်အလက်များ၏လုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများနှင့်သင်မျှဝေထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအခြားသူများလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များမှတဆင့်သင်ထုတ်ဖော်သို့မဟုတ်ရရှိသောအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ၏တိကျမှု၊ အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတစ်ဆင့်တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့သင်တင်သွင်းသောအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်မရှိပါ။
Sweepstakes, ပြိုင်ပွဲများ, စစ်တမ်းများ, ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပရိုမိုးရှင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြိုင်ပွဲဝင်ခြင်း၊ ပြိုင်ပွဲများ၊ စစ်တမ်းများ၊ မဲရုံများနှင့်အခြားပရိုမိုးရှင်းများ (တစ်ခုချင်းစီတွင်“ မြှင့်တင်ရေး”) ကိုသင်ပေးနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုတင်သွင်းနိုင်သည်။ ဤပရိုမိုးရှင်းသည်လုံးဝဆန္ဒအလျောက်သာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးတစ်ခုကို ၀ င်ရန်ရွေးချယ်ပါက၎င်းပရိုမိုးရှင်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအောင်နိုင်သူရွေးချယ်ခြင်း၊ ဆုပြည့်စုံခြင်းနှင့်ဆုရရှိသူစာရင်းတွင်ကဲ့သို့ဥပဒေအရတောင်းဆိုခြင်းကဲ့သို့သောအခြားပုဂ္ဂိုလ်များအားထုတ်ဖော်နိုင်သည်။ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးတစ်ခုကို ၀ င်ခြင်းအားဖြင့်၊ သင်သည်ဤမြှင့်တင်ရေးကိုထိန်းချုပ်သောတရားဝင်စည်းမျဉ်းများကိုသဘောတူသည်။ ၎င်းတွင်ဥပဒေအရတားမြစ်ထားသည့်ကိစ္စ မှလွဲ၍ စပွန်ဆာနှင့် / သို့မဟုတ်အခြားပါတီများအားသင်၏နာမည်၊ ကြော်ငြာသို့မဟုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများအတွက်သဏ္.ာန်။ Hissho သည်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်လူတုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားတတိယပါတီနှင့်အတူတကွကမ်းလှမ်းသည့်အခြားအင်္ဂါရပ်တစ်ခုကို ၀ င်ရန်အခွင့်အလမ်းများကိုပေးလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်များ၌သင်၏ပါဝင်မှုကြောင့်သင်၏သတင်းအချက်အလက်ကိုအတူတကွကမ်းလှမ်းသောတတိယပါတီနှင့်အတူမျှဝေနိုင်သည်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည့်အချိန်တွင်ထုတ်ဖော်လိမ့်မည်။
Hyperlink များနှင့် Plug-Ins ။ လက်ဆောင်ကဒ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ၏အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းကဏ္plugများ၊ plug-in များ (ဥပမာနောက်လာမည့်အခန်းတွင်ဆွေးနွေးထားသည့်လူမှုအသွင်အပြင်များ)၊ တတိယပါတီ၏ခြေရာခံနည်းပညာများနှင့်အခြားတတိယပါတီ application များပါ ၀ င်သည်။ တတိယပါတီ (“ တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များ”) မှလည်ပတ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သောအကြောင်းအရာများ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ပေါ်လစီများသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ပတ်သတ်၍ တာ ၀ န်ယူမှုနှင့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံခြင်းမပြုပါ။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအခြားသူများအားမပေးမီသူတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်စည်းကမ်းချက်များနှင့်မူဝါဒများကိုတစ်ခုချင်းစီတင်ထားနိုင်သည်၊ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်မူဝါဒများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထိန်းချုပ်သည်၊ တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်အော်ပရေတာ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်ပေါ်လစီများသည်၎င်းတို့ကိုထိန်းချုပ်သည်။
တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်သီးသန့်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများရှိသည်။ တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များမှကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များမှတစ်ဆင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစုဆောင်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပေါင်းစပ်ခြင်း မှလွဲ၍ တတိယပါတီမှရရှိသောအချက်အလက်များသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဆက်စပ်သည့်တိုင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကန့်သတ်ချက်များနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ ဤသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်အရသို့သော်ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များသည်တတိယပါတီမှတားမြစ်ထားသည့်မည်သည့်ကန့်သတ်ချက်များကိုမဆိုခံရသည်။ တနည်းအားဖြင့်တတိယပါတီများမှစုဆောင်းသိုလှောင်ခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းသတင်းအချက်အလက်သည်၎င်းတို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများနှင့်အလေ့အကျင့်များနှင့်ဆက်လက်ရှိနေခြင်း၊ ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်လက်၍ သတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေခြင်း၊ မျှဝေထားသည့်သတင်းအချက်အလက်အမျိုးအစားများနှင့်တတိယပါတီမှအခြားသူများအားသင်မြင်တွေ့နိုင်သည့်အရာများအပေါ်သင်၏ရွေးချယ်မှုများဆက်လက်ရှိနေသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ ဤတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်သင့်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုလွတ်လပ်စွာစုဆောင်းရန်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် cookies များ၊ web beacons များနှင့်အခြား Tracking နည်းပညာကို သုံး၍ တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ privacy သတိပေးချက်ကိုသင်ဖတ်သင့်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဤတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်သင့်ထံမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတောင်းခံနိုင်သည်။
လူမှုရေးလက္ခဏာများ။ အချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရာတွင်တတိယပါတီလူမှုကွန်ယက်များ (“ လူမှုရေးအသွင်အပြင်များ”) အပါအ ၀ င်သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များအကြားအစပြုလုပ်ဆောင်သောလူမှုရေးနှင့်အခြားဆက်သွယ်မှုများကိုခွင့်ပြုရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ လူမှုအသွင်အပြင်များဥပမာတွင် third party ဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိသင်၏အကောင့်မှဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအကြောင်းအရာများကိုထုတ်လွှင့်နိုင်ခြင်းပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့“ ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း” သို့မဟုတ်“ မျှဝေခြင်း” လုပ်ရန်၊ တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်သင်၏သုံးစွဲသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကို အသုံးပြု၍ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသို့လော့အင်ဝင်ရန်; သို့မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်လူမှုအသွင်အပြင်များကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ပါက၊ သင်တင်သော (သို့) အသုံးပြုခွင့်ကိုပေးသောသတင်းအချက်အလက်ကိုအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာအပါအဝင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်သို့မဟုတ်သင်အသုံးပြုသောလူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်း၏ပံ့ပိုးသူကလူသိရှင်ကြားပြသနိုင်သည်။ ။ အလားတူစွာသင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုရည်ညွှန်းသောတတိယပါတီပလက်ဖောင်း၊ ဆိုက်၊ အပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုတွင် (ဥပမာ၊ tweet သို့မဟုတ် status update တွင် Hissho နှင့်ဆက်စပ်သည့် hashtag ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်) သတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ထားလျှင်သင်၏စာမူကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်လည်းဖော်ပြနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာအဖြစ်ကုသပါလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် Hissho နှင့်တတိယပါတီသည်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်အသုံးပြုခြင်းအကြောင်းအချို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များမှအခြားအသုံးပြုသူများကကျွန်ုပ်တို့အားသူတို့၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်များကိုခွင့်ပြုလျှင်သင်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုသင်ရနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်သင်တို့၏“ ဆက်သွယ်မှု” များထဲမှတစ်ခုသို့မဟုတ်သင်၏“ ဆက်သွယ်မှုများ” ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများ၊ ပရိုဖိုင်မှတဆင့်သင်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရနိုင်သည်။ တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များမှစာမျက်နှာများသို့မဟုတ်အလားတူစာမျက်နှာများ။
ပရိုမိုးရှင်းဆက်သွယ်ရေး။ သင်ဆက်သွယ်မှုတွင်ဖော်ပြထားသောညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့ထံမှအရောင်းမြှင့်တင်ရေးအီးမေးလ်ဆက်သွယ်မှုကိုလက်ခံရရှိခြင်းမှသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဆက်သွယ်ရေးကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်လျှင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသောစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများကဲ့သို့သောအရောင်းမြှင့်တင်ရေးမဟုတ်သောအီးမေးလ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ပေးပို့နိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းများသည်သင်သတိပေးချက်များ၊ အသံများနှင့်အိုင်ကွန်အမှတ်အသားများပါဝင်နိုင်သည့်အသိပေးချက်များကိုပေးပို့နိုင်သည်။ ဤတွန်းအားပေးသောအသိပေးချက်များ (သို့) In-app မက်ဆေ့ခ်ျများသည်သင့်အတွက်အကျိုးရှိစေမည့်ထုတ်ကုန်များ၊ ၎င်းတို့ကို app ၏ချိန်ညှိချက်များတွင် configure လုပ်နိုင်သည်။ အီးမေးလ်များကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဆက်သွယ်ရေးကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်လျှင်ပင် app ကိုသင်အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသောစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများကဲ့သို့သောမြှင့်တင်ရေးမဟုတ်သော push အကြောင်းကြားစာများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ပေးပို့နိုင်သည်။
Analytics, Advertising, အွန်လိုင်းခြေရာခံခြင်းနှင့်သင်၏ရွေးချယ်မှု။ Google Analytics မှ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout သို့ သွား၍ Google Analytics မှဖယ်ထုတ်ခြင်း Browser Add-on ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် cookies များကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရွေးချယ်မှုများကိုသင်လုပ်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်အချို့ကြော်ငြာကွန်ယက်များနှင့်လဲလှယ်မှုများသည် Digital Advertising Alliance (DAA) AdChoices အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်နိုင်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုအခြေခံသည့်ကြော်ငြာများအတွက် Advertising Option Icon ကိုပြလိမ့်မည်။ DAA AdChoices အစီအစဉ်နှင့် http://www.youradchoices.com/ နှင့်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်ရွေးချယ်ခြင်းအစီအစဉ်နှင့် ပါတ်သက်၍ http://www.aboutads.info/appchoices တွင်ပိုမိုလေ့လာနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အချို့ကြော်ငြာကွန်ယက်များနှင့်လဲလှယ်မှုများသည် Network Advertising Initiative (NAI) တွင်ပါ ၀ င်ပါ။ NAI သည်သုံးစွဲသူများအား NAI အဖွဲ့ဝင်များ၏ကြော်ငြာကွန်ယက်များမှပစ်မှတ်ထားသောကြော်ငြာများကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည့်ကိရိယာတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ပစ်မှတ်ထားကြော်ငြာခြင်းမှရွေးချယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိုကိရိယာကိုအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုပါက http://www.networkadvertising.org/choices/ ကိုနှိပ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုရမည်မှာ၊ သင်သည်သတ်မှတ်ထားသောကြော်ငြာအမျိုးအစားအချို့ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သော်လည်း၊ အခြားကြော်ငြာအမျိုးအစားများကိုသင်ဆက်လက်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်ကိုသတိပြုပါ။ အကယ်၍ သင်၏ browser များကဤ opt-out ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုသင်ကြည့်ရှုသောအခါ cookies များကိုငြင်းပယ်ရန်စီစဉ်ထားသည်သို့မဟုတ်သင်ကွတ်ကီးများကိုနောက်ပိုင်းတွင်ဖျက်ပစ်လျှင်၊ အခြားစက်သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာကိုသုံးပါ၊ သို့မဟုတ်မဟုတ်သောဘရောက်ဇာအခြေပြုနည်းလမ်းအသုံးပြုခြင်း (ဥပမာမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း) ကိုသုံးပါ။ သင်၏ NAI / DAA browser အခြေပြု opt-out သည်ထိရောက်မှုရှိကောင်းရှိမည်မဟုတ်ပါ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပြင်ဘက်အသုံးပြုသူများ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်အခြေစိုက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအမေရိကန်ဥပဒေဖြင့်အုပ်ချုပ်သည်။ သင်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပမှဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်များကိုအသုံးပြုနေပါကဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတစ်ဆင့်ကောက်ယူထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုသတိပြုပါ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးဥပဒေသည်သင်နေထိုင်သောနိုင်ငံ၏ဥပဒေနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုပေးခြင်းသည်ဤသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အပါအဝင်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ သင်၏ဒေတာများကိုမျှတစွာနှင့်တရား ၀ င်ပြုမူရန်သေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုပြုပါမည်။
Privacy Shield တွင်ပါဝင်ခြင်း - နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အမေရိကန်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနမှဥရောပစီးပွားရေးAreaရိယာ (EEA) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများထံမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ EU-US Privacy Shield Framework တွင်ပါ ၀ င်ပြီးလိုက်နာဆောင်ရွက်သည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း။ မဖြေရှင်းနိုင်သောတိုင်ကြားမှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမည့်လွတ်လပ်သောအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့သည်ယူကေစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သူ၊ ပြန်ကြားရေးကော်မရှင်နာရုံး၊ https://ico.org.uk/။ Privacy Shield အစီအစဉ်နှင့် Privacy Shield တွင်ပါ ၀ င်ရန်အတည်ပြုထားသောမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမဆိုဤနေရာတွင်သင်ပိုမိုရှာတွေ့နိုင်သည်။
https://www.privacyshield.gov/welcome | https://www.privacyshield.gov/list
ကလေးများ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်အသက် ၁၃ နှစ်အောက်ကလေးများအတွက်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက် ၁၃ နှစ်အောက်ကလေးများထံမှသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိပါ။
ဒေတာလုံခြုံရေး။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အီလက်ထရောနစ်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာအကာအကွယ်များထားရှိရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအဆင့်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ၁၀၀၁TP1T လုံခြုံမှုရှိရန်အင်တာနက်ပေါ်မှမည်သည့်ဒေတာကိုမှမပေးနိုင်ပါ။ ရလဒ်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်ကြိုးပမ်းသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှကောက်ယူရရှိသောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုလုံခြုံမှုကိုအာမခံပေးနိုင်သည်။
ဒီသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်ကိုပြောင်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်အားအခါအားလျော်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့ကဤသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်၏ထိပ်ဆုံးရှိရက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်သင့်ကို (ဥပမာကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ပင်မစာမျက်နှာသို့ကြေညာချက်တစ်ခုထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်သင့်ထံအီးမေးလ်ပို့ခြင်းစသည့်) ထပ်မံအသိပေးချက်များပေးလိမ့်မည်။ အသိပေးချက်) ။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော Privacy Notice ကိုတင်ပြီးလျှင်ပြောင်းလဲမှုမှန်သမျှသည်ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းသည်ထိုအချိန်ကတင်ထားသော Privacy Notice ကိုသင်သဘောတူကြောင်းဖော်ပြသည်။ သင်သဘောမတူပါက ၀ ဘ်ဆိုဒ်များအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းပြီး ၀ က်ဘ်ဆိုက်များဒေါင်းလုပ်နှင့်အက်ပ်များကိုဖယ်ထုတ်ပါ။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အသိပေးချက်အောက်တွင်သင့်သဘောတူခွင့်ပြုချက်မရှိပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားစွာကိုင်တွယ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုကိုကာကွယ်နိုင်ရန်နည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သတ်၍ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့်အခါတိုင်း Privacy Notice ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။ ဤသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်ပါပြprovision္ဌာန်းချက်ကိုအရည်အချင်းပြည့်စုံသောခုံရုံးမှတရား ၀ င်ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်တရားမ ၀ င်သို့မဟုတ်အတည်မပြုနိုင်သောအတိုင်းအတာအထိကျန်ရှိသောခိုင်လုံသော၊
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ။ ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များဘာပြောရမည်ကိုအမြဲစိတ်ဝင်စားသည်။ ဤသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၌မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ဤ“ ကယ်လီဖိုးနီးယားဖောက်သည်များအတွက်အပိုထုတ်ဖော်ပြမှုများ” သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သောဖောက်သည်များနှင့် Hissho International, LLC နှင့်ယင်း၏တွဲဖက်များနှင့်လက်အောက်ခံများ (“ Hissho”“ ငါတို့စုဆောင်းထားသည့်သုံးစွဲသူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ) “ ငါတို့” သို့မဟုတ်“ ငါတို့”) အွန်လိုင်းနှစ်ခုစလုံး - မည်သည့် Hissho ဆိုဒ်၊ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်အခြားအပိုဆောင်းဖော်ပြချက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အခြားအွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုမှမပါ ၀ င်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်းကောက်ယူခဲ့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အမျိုးအစားများနှင့်စုဆောင်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အမျိုးအစားများအတွက်၊ ထိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏အရင်းအမြစ်များအမျိုးအစားများ၊ စုဆောင်းရန်အတွက်စီးပွားရေးနှင့်စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏အမျိုးအစားများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ထုတ်ဖော်ထားသည်။
အမည်အစစ်အမှန်၊ စာတိုက်လိပ်စာ၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ ထူးခြားသောကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသား (ဖောက်သည်နံပါတ်၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်နှင့်ကွတ်ကီးများ၊ beacons၊ pixel tag များ၊ မိုဘိုင်းကြော်ငြာနံပါတ်များ၊ သို့မဟုတ်အလားတူနည်းပညာများ) အပါအဝင်အွန်လိုင်းအမှတ်အသား၊ အင်တာနက် protocol လိပ်စာ၊ နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာ
ဖောက်သည်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ဆက်စပ်သူများထံမှတိုက်ရိုက်
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း အမှာစာများနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြည့်ဆည်းခြင်း၊ ဖောက်သည်အချက်အလက်များကိုအတည်ပြုခြင်း၊ ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းများ; ပြိုင်ပွဲများ၊ လှူခြင်းနှင့်အခြားရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းတို့ကိုစီမံခြင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး; ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု; ထုတ်ကုန် / ၀ န်ဆောင်မှုတိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ပြည်တွင်းရေးသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လုံခြုံရေးအဖြစ်အပျက်များကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိသော၊ လှည့်စားတတ်သော၊ လှည့်စားသော၊ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး နှင့်လက်ရှိအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းအရောင်းအ ၀ ယ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စာရင်းစစ်ခြင်း၊ ထူးခြားသော visitors ည့်သည်များအတွက်ကြော်ငြာဆွဲဆောင်မှုများကိုရေတွက်ခြင်း၊ ကြော်ငြာဆွဲဆောင်မှုများ၏တည်နေရာနှင့်အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ ရှိပြီးသားရည်ရွယ်ထားသောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသောအမှားများကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် debugging; နှင့်တောင်းဆိုမှုများနှင့်ဖောက်သည်အဖြစ်အပျက်များ၏ကိုင်တွယ်စီမံခန့်ခွဲမှု။ တောင်းဆိုမှုများနှင့်ဖောက်သည်ဖြစ်ရပ်များကိုင်တွယ်။
၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ လက်လီလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ တွဲဖက်သူများ၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ အာမခံနှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်များ (ဖောက်သည်တစ် ဦး ကလူမှုရေးကွန်ယက်တွင်အကြောင်းအရာများကိုမျှဝေရန်တောင်းဆိုထားသည့်နေရာ)
ခရက်ဒစ် / ဒက်ဘစ်ကဒ်နံပါတ်၊ လုံခြုံရေးကုဒ်နှင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်နေ့ရက်များအပါအ ၀ င်ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ။
အမှာစာများနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းများ; လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်များကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိသော၊ လှည့်စားတတ်သော၊ လှည့်စားသော၊ နှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေး။
၀ က်ဘ်ဆိုက်များပံ့ပိုးပေးသူများ၊ လက်လီလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ငွေပေးချေသူများနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး
လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်များကိုရှာဖွေခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိသော၊ လှည့်စားတတ်သော၊ လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ်တရားမ ၀ င် ၀ င်ရောက်မှုများမှကာကွယ်ရန်နှင့်ထိုတာ ၀ န်ရှိသူများအားတရားစွဲဆိုခြင်း။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ / ကျန်းမာရေးအာမခံသတင်းအချက်အလက်
အသက်၊ ကျား၊ မ၊ လူမျိုးစု၊ ပညာရေးသမိုင်း၊ အလုပ်အကိုင်၊ အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ၊
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း ပြည်တွင်းရေးသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး; ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု; ထုတ်ကုန် / ၀ န်ဆောင်မှုတိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ နှင့်ဖောက်သည်အဖြစ်အပျက်များ၏တောင်းဆိုမှုများနှင့်ကိုင်တွယ်၏အုပ်ချုပ်ရေး
၀ က်ဘ်ဆိုက်များပံ့ပိုးသူများ၊ လက်လီလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊
၀ ယ်ယူထားသောထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုမှတ်တမ်းများသို့မဟုတ်အခြား ၀ ယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်စားသုံးခြင်းသမိုင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ဖြစ်ရပ်များမှတ်ပုံတင်ခြင်း / တက်ရောက်သူသတင်းအချက်အလက်များအပါအ ၀ င်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း အမှာစာများနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြည့်ဆည်းခြင်း၊ အဖြစ်အပျက်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး; ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု; ထုတ်ကုန် / ၀ န်ဆောင်မှုတိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ပြည်တွင်းရေးသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လုံခြုံရေးအဖြစ်အပျက်များကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိသော၊ လှည့်စားတတ်သော၊ လှည့်စားသော၊ နှင့်ဖောက်သည်အဖြစ်အပျက်များ၏တောင်းဆိုမှုများနှင့်ကိုင်တွယ်
အင်တာနက် (သို့) အခြားအီလက်ထရောနစ်ကွန်ရက်လှုပ်ရှားမှုသတင်းအချက်အလက်၊ browsing history၊ ရှာဖွေခြင်းသမိုင်း၊ ဖောက်သည်တစ်ယောက်၏အင်တာနက် ၀ ဘ်ဆိုဒ်၊ အပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်ကြော်ငြာနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်၊
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း စျေးကွက်ရှာဖွေရေး; ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု; ထုတ်ကုန် / ၀ န်ဆောင်မှုတိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ပြည်တွင်းရေးသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လုံခြုံရေးအဖြစ်အပျက်များကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိသော၊ လှည့်စားတတ်သော၊ လှည့်စားသော၊ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး နှင့်လက်ရှိအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းအရောင်းအ ၀ ယ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စာရင်းစစ်ခြင်း၊ ထူးခြားသော visitors ည့်သည်များအတွက်ကြော်ငြာဆွဲဆောင်မှုများကိုရေတွက်ခြင်း၊ ကြော်ငြာဆွဲဆောင်မှုများ၏တည်နေရာနှင့်အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ နှင့်လက်ရှိရည်ရွယ်ထားသောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသောအမှားအယွင်းများကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက်ဆွေးနွေးခြင်း
ဖောက်သည်များမှ (သူတို့၏ browser များမှတဆင့်) တိုက်ရိုက်
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း (အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူများအားအနီးဆုံး Hissho စတိုးကိုအလိုအလျောက်ဖော်ပြရန်) ။
လက်လီမိတ်ဖက်များ၏နေရာများရှိ CCTV ကင်မရာများမှဗီဒီယိုနှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအသံဖမ်းခြင်းများအပါအ ၀ င်အသံ၊
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း လုံခြုံရေးအဖြစ်အပျက်များကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိသော၊ လှည့်စားတတ်သော၊ လှည့်စားသော၊ နှင့်တောင်းဆိုမှုများနှင့်ဖောက်သည်အဖြစ်အပျက်များ၏အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကိုင်တွယ်။
၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ လက်လီလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊
မေးခွန်းလွှာ / စစ်တမ်းတုံ့ပြန်မှု
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း စျေးကွက်ရှာဖွေရေး; ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု; ထုတ်ကုန် / ၀ န်ဆောင်မှုတိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ နှင့်ပြည်တွင်းသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုတောင်းခံမှုသို့မဟုတ်ပြ,နာ၊ ပြောဆိုချက်သို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်နှင့် (သို့) အခြားအရာများနှင့် ဆက်စပ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားဝယ်သူကပေးသောအခြားမည်သည့်အချက်အလက်မဆို။
သတင်းအချက်အလက်ပေးအပ်ရသည့်အကြောင်းရင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဝက်ဘ်ဆိုက်ပံ့ပိုးသူများ၊ လက်လီလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ တွဲဖက်များ၊ အာမခံနှင့်အခြားမည်သည့်တတိယပါတီမဆို
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တရားဝင်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုလိုက်နာရန်၊ ဥပဒေအရအရေးယူမှုများသို့မဟုတ်တောင်းဆိုမှုများကိုဆန့်ကျင်ရန်နှင့်အခွင့်အရေးများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ဘဝ၊ ကျန်းမာရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် / သို့မဟုတ်လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ရန်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အမျိုးအစားများကိုစုဆောင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသို့မဟုတ်မည်သည့်တတိယပါတီ၏။
Access / ဖျက်ခြင်း။ ကယ်လီဖိုးနီးယားဖောက်သည်များသည်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည် -
ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်း၊ အသုံးပြုပြီးထုတ်ဖော်သော၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းခဲ့သည့်၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို (“ ဝင်ရောက်ခွင့်တောင်းဆိုချက်” သို့မဟုတ်“ သိရန်တောင်းဆိုခြင်း” ဟုထုတ်ဖော်); နှင့်
Hissho သည် Hissho ("ဖျက်ခြင်းတောင်းဆိုမှု" ဟုရည်ညွှန်းသည်) စုဆောင်းသို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းထားသော၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖျက်ပစ်သည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားဖောက်သည်များသည် ၄ င်းတို့ကိုယ်စားကယ်လီဖိုးနီးယားစားသုံးသူအခွင့်အရေးတောင်းဆိုချက်ကိုတင်သွင်းရန်အတွက်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဤသို့ပြုရန် ကျေးဇူးပြု၍ ကိုယ်စားလှယ်မှ (704) 926-2200 သို့ info@hisshosushi.com သို့အီးမေးလ်ပို့ခြင်းသို့မဟုတ် 11949 Steele Creek Road၊ Webmaster, Hissho International, LLC သို့စာပို့ခြင်းဖြင့်သင့်ကိုယ်စားတောင်းခံပါ။ , Charlotte, NC 28273. တောင်းဆိုမှုတစ်ခုကိုတင်ပြသည့်အခါကိုယ်စားလှယ်မှအောက်ပါအချက်များလိုအပ်သည် -
အွန်လိုင်းတောင်းဆိုမှုပုံစံ (သို့) သုံးစွဲသူစောင့်ရှောက်ရေးကိုယ်စားလှယ်မှအချက်ပြသောအခါသင်၏အမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ စာပို့သင်္ကေတနှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးပါ။ နှင့်
၄ င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အမည်နှင့်အီးမေးလိပ်စာ၊ သင့်ကိုယ်စားတောင်းခံမှုကိုတင်သွင်းရန်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းဖော်ပြသည့်ကြေငြာချက်တစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်လျှင်သင်သူတို့ကိုကယ်လီဖိုးနီးယားအောက်ရှိတရားဝင်ရှေ့နေအားပေးအပ်ကြောင်းဖော်ပြသည့်ကြေငြာချက်တစ်ခုပေးပါ။ ဥပဒေ။ ထိုသတင်းအချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်အားပေးသင့်သည်။
ကိုယ်စားလှယ်သည်တောင်းဆိုချက်ကိုတင်ပြပြီးပါကသင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်သင့်အားအီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ သင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်သင်နှင့် / သို့မဟုတ်သင်၏အေးဂျင့်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နောက်မှလိုက်နိုင်သည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားဥပဒေနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၂ လတာကာလအတွင်းဖောက်သည်ထံမှ ၀ င်ရောက်မှုတောင်းဆိုမှုနှစ်ခုကိုသာတုံ့ပြန်ရန်မူဝါဒရှိသည်။
ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိ။ ထို့အပြင်၊ သင် Hissho မှကယ်လီဖိုးနီးယားဥပဒေမှပေးအပ်ထားသော privacy အခွင့်အရေးများကိုကျင့်သုံးရန်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုခံယူခွင့်မရှိပါ။
အချို့သောဒေတာများကိုမျှဝေခြင်းမှရွေးချယ်ပါ။ ကယ်လီဖိုးနီးယားဥပဒေကကယ်လီဖိုးနီးယားရှိဖောက်သည်များအားသူတို့၏သတင်းအချက်အလက်များကိုတတိယပါတီများနှင့်မည်သို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေခြင်းနှင့်အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်တတိယပါတီများနှင့်တွဲဖက်သူများ၏တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတောင်းခံရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ ဥပဒေအရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည်ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ရမည်သို့မဟုတ်ကယ်လီဖိုးနီးယားဖောက်သည်များအားဤခွဲဝေမှုအမျိုးအစားကို ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုရန်ခွင့်ပြုရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်တတိယပါတီများသို့မဟုတ်တွဲဖက်များ၏တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ (သီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း) တတိယပါတီများသို့မဟုတ်တွဲဖက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောသင့်အကြောင်းအချို့သောအချက်အလက်များကိုအချိန်နှင့်အမျှဝေမျှရန်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပါကသင်၏ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက်များကို (ကယ်လီဖိုးနီးယား Shine the Light Act မှသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း) မျှဝေခြင်းကိုသင်ရှောင်ရှားပြီး (၇၀၄) ၉၂၆ သို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်ဤဥပဒေနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့၏လိုက်နာမှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုတောင်းခံနိုင်သည်။ ၂၂၀၀၊ info@hisshosushi.com သို့မဟုတ်အီးမေးလ် ၁၁၉၄၉ Steele Creek Road၊ Charlotte, NC 28273. သို့ Webmaster, Hissho International, LLC သို့စာပို့ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ သင်၏အမည်၊ လမ်းလိပ်စာ၊ မြို့၊ ပြည်နယ်နှင့် ZIP ကုဒ်တို့ကိုတောင်းခံပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှစ်စဉ်ဖောက်သည်တစ် ဦး ကိုတောင်းဆိုမှုတစ်ခုတည်းကိုသာတုံ့ပြန်ရန်လိုအပ်ပြီးဤအီးမေးလ်လိပ်စာသို့မဟုတ်စာတိုက်လိပ်စာ မှလွဲ၍ အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ပြုလုပ်သောတောင်းဆိုမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့မတုံ့ပြန်ရန်သတိပြုပါ။
သင်၌ Hissho ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီများနှင့်အလေ့အကျင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။